အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးအောင်ပြောပြတဲ့ “ရည်းစားထားနည်း” - Barnyar Barnyar
အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးအောင်ပြောပြတဲ့ “ရည်းစားထားနည်း”
April 10, 2022 linn htet Life Style 0
မြန်မာပြည်မှာ ကွမ်းယာရောင်းသူဘဝကနေ အပတ်တကုတ်ကြိုးစားရင်း အောင်မြင်မှုတွေရလာပြီး အောင်သမာဓိ ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာတဲ့ “ဦးအောင် (ဦးအောင်ဆန်းဝင်း)” က သူ့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဘဝအကြောင်းကို “ကွမ်းယာသည်ရဲ့ ရည်းစားထားနည်း” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။
ကွမ်ယာသည်ရဲ့ရည်းစားထားနည်း ဘာနေ့သမီး လဲ? မမေးလိုက်မိဘူး အရပ်အနိမ့်အမြင့် မတိုင်းလိုက်ရသလို သွေးလဲမစစ်လိုက်ရပါဘူး မြင်တဲ့နေက စကြိုက်တာဘဲ
စီးပွားပညာစစ်တမ်း သူ့နောက်မှာ ဘာပကာသနမှ မရှိသလို ပညာအရည်ချင်း ၈ တန်း တောင်သူသားသမီး ကိုတွေနောက်မှာတော့ ကွမ်ယာဆိုင်းဘုတ်သာရှိ မိဘတောင်သူ ပညာအရည်ချင်း ၁၀ တန်း
မိဘမျိူးရိုး စစ်ဆေးဖို့ နေနေသာသာ သူ့မိဘတို့သိမှာ ကြောက်လို့ သိုသိုသိပ်သိပ် ရည်းစားသက်တမ်း အဖြေစောင့်ရတာ သုံးလ မင်္ဂလာဆောင်ရဖို့ ၅နှစ် စောင့်ရတယ်
စေ့စပ်ပွဲ ချိန်တွေ့လို့ လူမိတဲ့ သိတဲ့ည အဲဒါစေ့စပ်ပွဲလို့ ထင်တာပါပဲ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးတွေ အဲဒီည တယောက်မှ မပါတာတော့ သေချာတာပဲ
မင်္ဂလာဆောင်ခန်းမ ဘယ်ခန်းမှ မသွားနိုင်ပါဘူး သူ့အိမ် ကိုယ့်အိမ်က ခန်းမပါဘဲ လက်ထပ်စာချုပ်ခန်း မပါသလိုဘဲ သတို့သမီး သတို့သားအရံ ခေါ်ဖို့ နေနေသာသာ ကိုယ်တွေတောင် ဝတ်စုံဖိုး မလောက်လို့
မှတ်တမ်းတင် VDO မှတ်တမ်း မခေါ်နိုင်ပါဘူး ဓါတ်ပုံဆရာက ခင်လို့ ၃ ပုံဘဲ ရိုက်ပေးတယ် ခုတော့ အမျိုးတွေနဲ့ပုံ တစ်ပုံဘဲ ရှိတော့တယ် မင်္ဂလာမောင်မယ် ဆွမ်းကယ်တို့ ကိတ်မုန့်ခွန်တို့ အလှပုံတို့ မရိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး
မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ ၈၀၀၀ ရပါတယ် သိန်း၈၀၀၀ မဟုတ်ပါ ရိုးရိုး ရှစ်ထောင်ကျပ်ပါ ခုခေတ်လိုဆိုရင် တစ်ထောင်တန် ရှစ်ရွက်ပေါ့ဗျာ ရတာနဲ့ကုန်တာ အတူတူလောက်ပါဘဲ ဒါပေမဲ့ အဲဒီငွေက လာသမျှလူကို ထမင်းကျွေးနိုင်ပါတယ် ရွှေတစ်ကျပ်သား ၃၅၀၀
ဟန်းနီးမွန်းခရီး မင်္ဂလာဆောင်ပြီး နောက်ရက် မိန်းမခေါ်ပြီး ရွှေတောပြန်ပြီး ကွမ်းယာယာ ရောင်းနေလိုက်တာပါဘဲ.. ချောင်းသာ ငပလီသွားဖို့ နေနေသာသာ မင်္ဂလာဆောင်အကြွေးဆပ်ဖို့ ဈေးရောင်းရမယ်လေ
နိဂုံးချုပ်တော့ မင်္ဂလာဘယ်လိုဆောင်တာ အရေးမကြီပါဘူး မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက် ဘယ်လိုနေ ဘယ်လိုသေ သွားကြတယ်ဆို အေရးကြီးတယ်ထင်တာပဲ
ခုထိ အိမ်ထောင်သက် (၃၅)နှစ် ဘာအမှတ်တရပွဲမှ မလုပ်ဘူးသေးပါဘူး မလိုအပ်ဘဲ အပိုမကုန်ချင်လို့ပါ အမှတ်တရများ များလွန်းလို့ မရေးတော့ပါဘူး
ထီးလိုတဖုံ ယပ်လိုတသွယ် အနွေးထည်လိုတမျိုး စောင့်ရှောက်နေတာကြောင့် သူမရှိရင်တော့ မနေတတ်တော့ဘူးဗျ
သံဝေဂ ဒါပေမဲ့လည်း တနေ့တော့ ခွဲကြရမှာလေ ဒါကြောင့် တရားဘဲအားကိုးရမှာမို့ စာတလုံးကြောင့် အသိတခုရနိုင်ကြပါစေ စာတစ်လုံးကြောင့် တခုခုတော့ရကြပါစေလို့
သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် Aung San Win အကောင့်ကနေ ဖော်ပြခဲ့ပြီး ပြန်လည်မျှဝေသူ ၃ ထောင်နီးပါး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပကာသနမဖက်ပဲ အရှိကို အရှိအတိုင်း ဘဝကို ရိုးသားကြိုးစားစွာ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ “ဦးအောင်” ကတော့ လူတိုင်း လေးစားအားကျရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ – Aung San Win (FB)
မွနျမာပွညျမှာ ကှမျးယာရောငျးသူဘဝကနေ အပတျတကုတျကွိုးစားရငျး အောငျမွငျမှုတှရေလာပွီး အောငျသမာဓိ ရှဆေိုငျပိုငျရှငျကွီးတဈယောကျ ဖွဈလာတဲ့ “ဦးအောငျ (ဦးအောငျဆနျးဝငျး)” က သူ့ရဲ့ရိုးရှငျးတဲ့ အိမျထောငျရေး ဘဝအကွောငျးကို “ကှမျးယာသညျရဲ့ ရညျးစားထားနညျး” ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျလေးနဲ့ ဝမြှေခဲ့ပါတယျ။
ကှမျယာသညျရဲ့ရညျးစားထားနညျး ဘာနသေ့မီး လဲ? မမေးလိုကျမိဘူး အရပျအနိမျ့အမွငျ့ မတိုငျးလိုကျရသလို သှေးလဲမစဈလိုကျရပါဘူး မွငျတဲ့နကေ စကွိုကျတာဘဲ
စီးပှားပညာစဈတမျး သူ့နောကျမှာ ဘာပကာသနမှ မရှိသလို ပညာအရညျခငျြး ၈ တနျး တောငျသူသားသမီး ကိုတှနေောကျမှာတော့ ကှမျယာဆိုငျးဘုတျသာရှိ မိဘတောငျသူ ပညာအရညျခငျြး ၁၀ တနျး
မိဘမြိူးရိုး စဈဆေးဖို့ နနေသောသာ သူ့မိဘတို့သိမှာ ကွောကျလို့ သိုသိုသိပျသိပျ ရညျးစားသကျတမျး အဖွစေောငျ့ရတာ သုံးလ မင်ျဂလာဆောငျရဖို့ ၅နှဈ စောငျ့ရတယျ
စစေ့ပျပှဲ ခြိနျတှလေို့ လူမိတဲ့ သိတဲ့ည အဲဒါစစေ့ပျပှဲလို့ ထငျတာပါပဲ ဂုဏျသရရှေိလူကွီးတှေ အဲဒီည တယောကျမှ မပါတာတော့ သခြောတာပဲ
မင်ျဂလာဆောငျခနျးမ ဘယျခနျးမှ မသှားနိုငျပါဘူး သူ့အိမျ ကိုယျ့အိမျက ခနျးမပါဘဲ လကျထပျစာခြုပျခနျး မပါသလိုဘဲ သတို့သမီး သတို့သားအရံ ချေါဖို့ နနေသောသာ ကိုယျတှတေောငျ ဝတျစုံဖိုး မလောကျလို့
မှတျတမျးတငျ VDO မှတျတမျး မချေါနိုငျပါဘူး ဓါတျပုံဆရာက ခငျလို့ ၃ ပုံဘဲ ရိုကျပေးတယျ ခုတော့ အမြိုးတှနေဲ့ပုံ တဈပုံဘဲ ရှိတော့တယျ မင်ျဂလာမောငျမယျ ဆှမျးကယျတို့ ကိတျမုနျ့ခှနျတို့ အလှပုံတို့ မရိုကျနိုငျခဲ့ပါဘူး
မင်ျဂလာလကျဖှဲ့ ၈၀၀၀ ရပါတယျ သိနျး၈၀၀၀ မဟုတျပါ ရိုးရိုး ရှဈထောငျကပျြပါ ခုခတျေလိုဆိုရငျ တဈထောငျတနျ ရှဈရှကျပေါ့ဗြာ ရတာနဲ့ကုနျတာ အတူတူလောကျပါဘဲ ဒါပမေဲ့ အဲဒီငှကေ လာသမြှလူကို ထမငျးကြှေးနိုငျပါတယျ ရှတေဈကပျြသား ၃၅၀၀
ဟနျးနီးမှနျးခရီး မင်ျဂလာဆောငျပွီး နောကျရကျ မိနျးမချေါပွီး ရှတေောပွနျပွီး ကှမျးယာယာ ရောငျးနလေိုကျတာပါဘဲ.. ခြောငျးသာ ငပလီသှားဖို့ နနေသောသာ မင်ျဂလာဆောငျအကွှေးဆပျဖို့ ဈေးရောငျးရမယျလေ
နိဂုံးခြုပျတော့ မင်ျဂလာဘယျလိုဆောငျတာ အရေးမကွီပါဘူး မင်ျဂလာဆောငျပွီးနောကျ ဘယျလိုနေ ဘယျလိုသေ သှားကွတယျဆို အရေးကွီးတယျထငျတာပဲ
ခုထိ အိမျထောငျသကျ (၃၅)နှဈ ဘာအမှတျတရပှဲမှ မလုပျဘူးသေးပါဘူး မလိုအပျဘဲ အပိုမကုနျခငျြလို့ပါ အမှတျတရမြား မြားလှနျးလို့ မရေးတော့ပါဘူး
ထီးလိုတဖုံ ယပျလိုတသှယျ အနှေးထညျလိုတမြိုး စောငျ့ရှောကျနတောကွောငျ့ သူမရှိရငျတော့ မနတေတျတော့ဘူးဗြ
သံဝဂေ ဒါပမေဲ့လညျး တနတေ့ော့ ခှဲကွရမှာလေ ဒါကွောငျ့ တရားဘဲအားကိုးရမှာမို့ စာတလုံးကွောငျ့ အသိတခုရနိုငျကွပါစေ စာတဈလုံးကွောငျ့ တခုခုတော့ရကွပါစလေို့
သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျ Aung San Win အကောငျ့ကနေ ဖျောပွခဲ့ပွီး ပွနျလညျမြှဝသေူ ၃ ထောငျနီးပါး ရှိခဲ့ပါတယျ။ ပကာသနမဖကျပဲ အရှိကို အရှိအတိုငျး ဘဝကို ရိုးသားကွိုးစားစှာ ဖွတျသနျးနတေဲ့ “ဦးအောငျ” ကတော့ လူတိုငျး လေးစားအားကရြတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျကွီး တဈဦးဖွဈပါတယျ။
ဓါတျပုံ – Aung San Win (FB)
Facebookကြောင့် မိသားစုပြိုကွဲပြီး အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့ သူ (ဖြစ်ရပ်မှန်)